Waddan Ammaan Darrada Maraykanka Awgeed, Muwaaddiniintiisa Uga Digay In Ay U Safraan - Waadinews | Somali News and Entertainments
Dawladda Shiinaha ayaa muwaaddiniinteeda dalxiiska ku taga Mareykanka uga digtay safarka ay ku tagayan Maraykanka inay aad uga taxaddaraan maadaamaa ay khatar amni darro ka soo wajihi karto. Wasaaradda dhaqanka iyo dalxiisaka Shiinaha ayaa muwaaddiniinta Shiinaha uga digtay khatar uga iman karta falalka ay ka mid yihiin tuugnimo iyo dilalka aan loo meel dayin oo Maraykanka ka dhaca loona adeegsado hubka sharci darrada.
Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sida oo kale sheegtay hay’adaha Sharciga ee Maraykanka inay muwaaddiniinta Shiinaha ay xadgudubyo u geystaan. Arrintan ayaa ku soo beegmeysa xilli uu Mareykanka iyo Shiinaha uu ka dhex taagan yahay dagaalka Ganacsiga.
Maraykanka ayaa bisha May canshuur dheeraad ah ku soo rogay maciishadaha Shiinaha uu soo saaro oo loo iib geeyo Mareykanka, iyada oo si gaar ah xayirad ugu soo rogtay shirkadda isgaarsiinta ugu weyn Shiinaha ee Huawei. Labada dhinacba waxay isku soo rogeen cashuuro dheeraad ah oo balaayiin doolar ku kacaya, waxaana laga cabsi qabaa dagaalka ganacsiga ee u dhaxeeya labad dal inuu si weyn u saameeyo dhaqaalaha labada dal. “Dhawaanahan waxaa Mareykanka si joogta ah uga dhaca dilal, dhac iyo tuugnimo. Wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ayaa waxay dalxiisayaasha Shiinaha ee u dalxiis tago Mareykanka uga digtay safarkooda ka hor iney talooyin ammaankooda ku saabsan ka helaan dalkooda” ayuu yidhi wariyeCCTV warka ka tabinayey.
Afhayeenka wasaaradda arrima dibadda Geng Shuang ayaa ka digay “xaaladaha amni xumo ee iska soo tarayo dalka Mareykanka.” “Wasaaradduna waxay digniinta ay muwaddiniinteeda u soo jeedisay oo ay safaradaha iyo qunsuliyadda Shiinaha uu leeyahayba ay ku sheegeen iney tahay waajib dowladda ku saaran iney ammaanka muwaaddiniinteeda meel kasta oo ay joogaanba ilaaliso.” BBC
Related Topics:MaraykankanewsShiinahaWaddan Muwaaddiniintiisa Uga Digay In Ay U Safraan Maraykanka